Haddii aad la kulantid qalitaanka xubinta taranka dumarka, waxaad u badan tahay inaad qabtid hal milyan iyo mid su'aalo ah oo ku saabsan sida hawshu u shaqeyso, waxa laga filayo inta lagu jiro soo kabashada, iyo xulashooyinka aad u leedahay qalliinka. Dumar badan, way ku caawinaysaa in la fahmo farqiga u dhexeeya laba ka mid ah hababka ugu caansan ee qalliinka ka saarista ilmogaleenka - robotic hysterectomy iyo laparoscopic hysterectomy - ka hor inta aan la gaarin go'aannada ugu dambeeya ee ku saabsan habraacooda.
Marka laga hadlayo qalliinka xubinta taranka dumarka ee Bartamaha Ohio, kooxda khabiirka ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxaa ka go'an bixinta qalabka ugu casrisan uguna casrisan iyo teknolojiyada la heli karo si loo hubiyo daaweynta ugu dhameystiran, bogsashada wax ku oolka ah, iyo soo kabashada ugu dhakhsaha badan. suurtagal ah Dib u eeg macluumaadka hoose si aad wax badan uga ogaato sida ay u shaqeyso kaadi-mareenka, oo ay ku jiraan waxa ka dhigaya robot-ka hiddo-mareenka marka laga reebo laparoscopic iyo / ama dhaq-dhaqaaqa ilmo-galeenka.
Muxuu sameeyaa xubinta taranka dumarka?
Haweenka qaba xanuunnada haweenka ee aan fiicnayn ama xun ee saameeya ilmo-galeenka ayaa badanaa ka faa'iideysta hysterectomy, taas oo loola jeedo qalliinka ka-saarista ilmo-galeenka. Xaaladaha qaarkood, xubinta taranka dumarka waxaa loo sameeyaa qaab isku dhafan oo sidoo kale looga saarayo ugxan sidaha, makaanka afkiisa, ama qaabab kale. Xaaladaha caadiga ah ee lagu daaweyn karo Qalitaanka qanjirka 'robotic' kooxda loo bogaadiyay ee 'Professional's for Health Women' waxaa ka mid ah:
Dhiigbax aan caadi ahayn oo xubinta taranka dumarka ah
Xaaladaha badankood, daaweyn yar oo faafa ayaa lagula talinayaa ka hor intaan loo gudbin robotic hysterectomy, taas oo caadi ahaan loogu talagalay bukaanada xaaladooda (yada) aysan ka jawaabin daaweynta kale.
Si ka duwan dhaq-dhaqaaqa ilmo-galeenka, oo sidoo kale loo yaqaan hysterectomy furan, hysterectomy robotic uma baahna jeexitaan dheer. Taabadalkeed, qalliinka xubinta taranka ee robot-ka waxaa lagu sameeyaa iyadoo la kaashanayo kaamirooyinka gudaha ah iyo aaladaha robotka, oo labadaba la gelinayo iyadoo la jeexjeexayo caloosha. Sababtaas awgeed, bukaan-socodka robot-ka ee hysterectomy waxay caadi ahaan ku raaxaystaan ​​muddo ka soo kabasho ka gaaban haweenka ku dhaca qalliinka furan. Si kastaba ha noqotee, bukaanku waa inay weli maanka ku hayaan in goynta ilmo-galeenka nooc kasta ha noqotee loo tixgeliyo qalliin weyn waxayna u badan tahay inay u baahan tahay hal ama dhowr habeen cisbitaalka ama xarunta qalliinka iyo sidoo kale muddo dheer oo soo kabasho ah.
Maxay yihiin faa'iidooyinka qalliinka qanjirka 'robotic hysterectomy' iyo 'ilmo-galeenka caadiga ah'?
Guud ahaan, qalliinka robotka, guud ahaan, wuxuu bixiyaa dhowr faa iidooyin qasab ah marka la barbar dhigo qalliinka furan. Haweenka u-qalma qalliinka, faa'iidooyinka robotic vs. furanka hysterectomy waxaa ka mid noqon kara:
Khatarta hoose ee dhibaatooyinka
Helitaanka qalliinka ka weyn
Dhaqdhaqaaq qalliin oo ballaaran
Sax qalliinka ka weyn
Muuqaal weyn inta lagu jiro qalliinka
Gaabasho, muddo soo kabasho oo raaxo leh
Nabaro aad u yar oo muuqda, haddii ay jiraan
Miyuu qanjirka 'laparoscopic hysterectomy' la mid yahay robotka?
In kasta oo ay yihiin nidaamyo isku mid ah, waxaa muhiim u ah haweenka inay sidoo kale fahmaan farqiga u dhexeeya robotic iyo laparoscopic hysterectomy. Sida qanjirka 'robotic hysterectomy', 'laparoscopic hysterectomy' wuxuu adeegsadaa yar yar, kaamirooyin jilicsan iyo aalado la geliyay iyadoo la marsiinayo qalliin yar. Si kastaba ha noqotee, qalliinka 'laparoscopic hysterectomy' waxaa lagu sameeyaa gacanta qalliinka miisaanka, halkii lagu qaban lahaa qalabka mashiinka fog. Intaa waxaa sii dheer, muuqaalka iyo qalliinka kala duwan ee dhaqdhaqaaqa ee suurtogalka ah ee laparoscopic hysterectomy way xadidan tahay marka la barbar dhigo awoodaha robotka. Sababtaas awgeed, qanjirka 'robotic hysterectomy' waxaa guud ahaan loo tixgeliyaa inuu ka sarreeyo labada makaan furan iyo laparoscopic.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan bukaanku uma qalmaan qalliinka qanjirka 'robotic hysterectomy'. Inta lagu guda jiro la-tashigaaga ka saarista ilmo-galeenka aan fiicnayn ee Dublin, Westerville, ama Columbus, OH, bixiyahaaga gaarka ah wuxuu si fiican dib ugu eegi doonaa diiwaanadaada iyo daraasadahaaga sawirada, wuxuu kala hadli doonaa xaaladdaada dhakhaatiirta kale haddii loo baahdo, oo wuxuu go'aamin doonaa in robotic hysterectomy ay adiga kugu habboon tahay.
Hel daryeelka goynta ah ee aad uqalanto qalitaanka qanjirka 'robotic hysterectomy' ee Bartamaha Ohio
Marka ay timaado jirkaaga, caafimaadkaaga, iyo mustaqbalkaaga, waxaad u qalantaa tan ugu fiican. Haddii xaalad caafimaad oo aan fiicnayn ay ka baxsato xakamaynta daaweynta qalliinka oo aad diyaar u tahay inaad ka fiirsato robotic hysterectomy, kooxda abaalmarinta ku guuleysatay ee khabiiro ku takhasusay Caafimaadka Haweenka ayaa kaa caawin kara. Si aad wax badan uga barato dhammaan xulashooyinka aad heli karto, call mid ka mid ah goobaheena ku habboon Dublin, Westerville, iyo Columbus, OH maanta si aan u ballansanno la-tashigaaga gaarka ah. Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinno inaad dareento naftaada mar kale oo aad dib ugu soo laabato ku raaxeysiga nolosha aad jeceshahay!